Warbixiinta dhirta, Warbixiinta Animal, macaan, Oil Warbixiinta Plant - Tong Rui Bio-Tech
waxa aan ku siin
Focus Oo Professional, samee Our Life Better!
Nanjing Tong Rui Bio-Tech Co., Ltd. oo loo yaqaan TRB, waxay diiradda saareysay soosaarka dabiiciga ah muddo 18 sano ah, TRB waa shirkad tiknoolajiyadeed ku saleysan oo isku darka R&D, wax soo saarka iyo iibinta suuqa caalamiga ah. Waxyaabaha TRB waxaa ka mid ah soosaarka dhirta, soosaarka xayawaanka, macmacaanka, nootropics, casiir miro iyo budada khudradda, saliidaha lagama maarmaanka ah iyo kaabayaasha nafaqada. TRB waxay hadda leedahay laba warshadood, mid waa warshad soosaar dabiici ah oo dabiici ah, tan kalena waa warshad soosaarka shinnida, waxaanan leenahay shahaadooyin taxane ah sida ISO9001, ISO22000, HACCP, ORGANICAL, FDA, HALAL, KOSHER.
Warbixiinta Green Shaaha
Gotu Kola Warbixiinta
MSF ee sayniska iyo tiknoolajiyada
Waxaan had iyo jeer yihiin safka hore ee sayniska iyo farsamada, si firfircoon uga qaybqaataan shirarka tacliinta gudaha iyo kuwa caalamiga ah iyo is-weydaarsiga technology warshadaha, iyo dejinayaan heerarka laga soosaaray dabiiciga ah ee khuseeya. Waxaan samaynay anti-qayilo, maaddooyinka shahwo, macaan iyo nootropics. products waa kulul-iibinta iyo sayniska iyo farsamada Xuduudda suuqa.
Top R & D awood
Waxaan ku soo wada urursaday R & D kooxaha ugu sareeya iyo qalab ku Shiinaha. Isla mar ahaantaana, aan ka helnay tashi iyo adeegyada farsamo ka hay'adihiisa uu u xilsaartay Yurub iyo Maraykanka. Waxaan leenahay laboratories madax banaan noo gaar ah, horumarsan sinji ku ool ah u yeela dabiiciga ah ee la xiriira, iyo in la horumariyo Taxanaha ah cilmi baaris qoto dheer oo taagayo iyo monomers.
18 sano oo waayo aragnimo ah la dhoofiyo, in ka badan 200 waxyaabaha taxane, kumanaan ka mid ah dhaqanka caalamiga ah gaadiidka, waayo-aragnimo ganacsi oo in ka badan 40 dal, oo aqoon u leh shuruucda qaranka khuseeya, macaamiisha siiyaan waxyaabaha our asaasiga ah iyo waxyaabaha kulul. Isla mar ahaantaana, aan loo daboolo baahida alaabooyinka kale ee ganacsiga ee macaamiisheena iyo bixiyaan xal one-stop alaabooyinka caafimaadka Shiinaha.
Cudurka faafa wuxuu lahaa saameyn balaaran ...
Calaamadaha la xiriira: caafimaadka wadnaha, chro ...
Geedaha, noolaha ugu badan ee agagaarka ...
Dhawaan, warbixintii ugu dambeysay ee xogta la sii daayay ...